News – OK Media
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သက်တော်စောင့် ချယ်ရီထက်ကို ပုဒ်မ ၅၀၅(က)အမှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချမှတ်ခံရ
March 31, 2022 Ok MediaLeaveaComment on ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သက်တော်စောင့် ချယ်ရီထက်ကို ပုဒ်မ ၅၀၅(က)အမှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချမှတ်ခံရ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သက်တော်စောင့် ချယ်ရီထက်ကို ပုဒ်မ ၅၀၅(က)အမှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချမှတ်ခံရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သက်တော်စောင့်ချယ်ရီထက် လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) အမှုအတွက် ယနေ့ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်လိုက်ကြောင်း ယင်း၏ရှေ့နေက ပြောသည်။ “ထောင် ၂ နှစ် ချလိုက်ပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အတွက်ပါ။သူ ကျန်းမာပါတယ်”ဟု ယင်းက ပြောသည်။ ချယ်ရီထက်သည် လက်ရှိတွင် ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ဖြင့် ထောင်သုံးနှစ်ချမှတ်ခံထားရပြီး ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်က ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) အမှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်းစွဲချက်တင်ခဲ့ရာ ၎င်းက မိမိအနေဖြင့် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ […]
သူတောင်းစားတစ်ဦးလိုဟန်ဆောင်ပြီးသားသုံးယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ဖခင်အိုတစ်ဦးရဲ့ ရလဒ်”
March 27, 2022 Ok MediaLeaveaComment on သူတောင်းစားတစ်ဦးလိုဟန်ဆောင်ပြီးသားသုံးယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ဖခင်အိုတစ်ဦးရဲ့ ရလဒ်”
INTERNET NEW သူတောင်းစားတစ်ဦးလိုဟန်ဆောင်ပြီးသားသုံးယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ဖခင်အိုတစ်ဦးရဲ့ ရလဒ်” September 13, 2021 – by Thida Lay – LeaveaComment သူတောင်းစားတစ်ဦးလိုဟန်ဆောင်ပြီးသားသုံးယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ဖခင်အိုတစ်ဦးရဲ့ ရလဒ်” Liu ဟာ သူ့မှာသား ၃ ယောက်ရှိပြီး သူရဲ့သားများကိုထောက်ပံ့ရန် မြို့သို့သွားပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Liu ဟာ မြို့မှာပင်ပန်းတဲ့အလုပ်များစွာကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း သားသုံးယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် ဆည်းပေးဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အပြင်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အသက် ၇၀ နီးပါးရှိပြီးဖြစ်တဲ့ Liu ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ယခင်လို့ ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်များကိုမလုပ်နိုင်တော့တာကြောင့် Liu ဟာ သူရဲ့ဇာတိမြို့သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူ့သားများနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူမနေခဲ့ရသလို သားများရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုသေချာမသိနေတာကြောင့် Liu ဟာ သူ့အပေါ် သားသုံးယောက်ရဲ့သဘောထားကိုစုံစမ်းရန် သူ့ကိုယ်သူ သူတောင်းစားတစ်ဦးလိုဟန်ဆောင်ကာ […]
၄၄လမ်း အမှုတွဲဖြစ်စဉ်မှာ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မပိုးကျော့ကျော့ခန့် မီးဖွားခဲ့
March 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on ၄၄လမ်း အမှုတွဲဖြစ်စဉ်မှာ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မပိုးကျော့ကျော့ခန့် မီးဖွားခဲ့
၄၄လမ္း အမႈတြဲျဖစ္စဥ္မွာ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မပိုးေက်ာ့ေက်ာ့ခန႔္ မီးဖြားခဲ့ မတ္ ၁၂၊ ၂၀၂၂ ၄၄ လမ္းျဖစ္စဥ္မွာ ဖမ္းဆီးခံ ခဲ့ရတဲ့ မပိုးေက်ာ့ေက်ာ့ခန႔္ဟာ မတ္လ ၁၁ ရက္ မနက္ ၁၁ နာရီ ပတ္ဝန္းက်င္က သမီးေလး ကိုေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ဖြားျမင္ ႏိုင္ ခဲ့တယ္လို႔ အမျဖစ္သူ ကေျပာပါတယ္ ၄၄လမ်း အမှုတွဲဖြစ်စဉ်မှာ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မပိုးကျော့ကျော့ခန့် မီးဖွားခဲ့ မတ် ၁၂၊ ၂၀၂၂ ၄၄ လမ်းဖြစ်စဉ်မှာ ဖမ်းဆီးခံ ခဲ့ရတဲ့ မပိုးကျော့ကျော့ခန့်ဟာ မတ်လ ၁၁ ရက် မနက် ၁၁ နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်က သမီးလေး ကိုချောချောမောမော ဖွားမြင် နိုင် ခဲ့တယ်လို့ အမဖြစ်သူ ကပြောပါတယ် မြောက်ဥက္ကလာက […]
အမှန်တရားအတွက် ကြိုးစားရင်း မိဘတွေ ကြိုးစား တည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ အိမ်လေး ချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော် ဂျပန်ကြီး
March 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on အမှန်တရားအတွက် ကြိုးစားရင်း မိဘတွေ ကြိုးစား တည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ အိမ်လေး ချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော် ဂျပန်ကြီး
Unicode ကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကို လျှောက်လှမ်းရင်း မိဘတွေ ကြိုးစားတည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေး ချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော် ဂျပန်ကြီး လက်ရှိနွေ ဦးတော် လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေဟာ စစ်အာဏာရှ င်စနစ်ဆိုးကြီးမှာ မရှင်သ န်လိုတဲ့ အတွက် လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ခိုလှုံရင်း တော်လှန်နြေ ကတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူေ တွထဲကပြည်သူေ တွဖြစ်တဲ့ အနုပ ညာရှင်တွေဟာ လည်း တောထဲမှာ နေထိုင်ရင်း ကြိုးစားရုန်းကန်ေ နကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာ လည်း The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင် ပွဲက အဆိုတော် ဂျပန်ကြီးကလည်း သူယုံကြည် ရာလမ်းတစ်ခုမှာ လျှောက်လှမ်း ရင်း နေအိမ်ချိ တ်ပိတ်ခံခဲ့ရတဲ့အေ ကြာင်းကို အခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။ “မနေ့က အေ ဖနဲ့အမေ ပိုင်တဲ့အိမ် ကျွန်တော် […]
PDF တွေကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၀ ရထားတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြော
March 13, 2022 March 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on PDF တွေကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၀ ရထားတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြော
uni ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၃ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) တွေကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ရရှိထားတယ်လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်က ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အွန်လိုင်းကနေ ပြုလုပ်တဲ့ ရန်ပုံငွေရှာဖွေပွဲမှာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်က အခုလို ပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက ပြည်သူတွေ ထောက်ပံ့တဲ့ ကာကွယ်ရေးရန်ပုံငွေတွေကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ခေတ်မီ လက်နက်တပ်ဆင်ရေးနဲ့ လက်နက် ထုတ်လုပ်ရေးတို့မှာ အဓိက အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးချင်းစီကို လက်နက် အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ပေးဖို့ကတော့ အလှမ်းဝေးနေသေးတယ်လို့ […]
တောထဲမှာ ထမင်းခြောက်ရက်တိတိမစားရဘဲ အသေအကြေတိုက်ခဲ့ရတဲ့ ပထဆုံးတိုက်ပွဲရဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြလာတဲ့ PDF လူငယ်တစ်ဦး
March 13, 2022 March 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on တောထဲမှာ ထမင်းခြောက်ရက်တိတိမစားရဘဲ အသေအကြေတိုက်ခဲ့ရတဲ့ ပထဆုံးတိုက်ပွဲရဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြလာတဲ့ PDF လူငယ်တစ်ဦး
uni တောထဲမှာ ထမင်းခြောက်ရက်တိတိမစားရဘဲ အသေအကြေတိုက်ခဲ့ရတဲ့ ပထဆုံးတိုက်ပွဲရဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြလာတဲ့ PDF လူငယ်တစ်ဦး ရဲစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့ လူငယ်တွေကတော့ အာဏာရှင်ကို အစွမ်းကုန် တိုက်ထုတ်ချေမှုန်းဖို့အတွက် PDF တပ်ဖွဲ့တွေကို ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြည်သူ့ရဲဘော်ဘဝကို ဂုဏ်ယူစွာခံယူလိုက်ပြီး အားလုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်ဝဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်တွေက အရာရာကို စွန့်လွှတ်စွန့်စားခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးကတော့ မြို့ပေါ်မှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဆန္ဒပြရာကနေ အခုလို PDF ဘဝကို ပြောင်းလဲခံယူခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလူငယ်လေးက တောထဲတောင်ထဲမှာ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုဒဏ်တွေကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးမှ စစ်ပညာတွေကို သင်ယူခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း သူက မြေပြင်မှာ အမှန်တကယ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကတစ်ဆင့် […]
မကြားဖူးတာတွေ မမြင်ဖူးတာတွေ မကြုံဖူးတာတွေကြီး အကုန်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ခေတ် ဆိုင်ကယ်ဝယ်မပေးလို့ မိဘနှစ်ပါးကို….
March 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on မကြားဖူးတာတွေ မမြင်ဖူးတာတွေ မကြုံဖူးတာတွေကြီး အကုန်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ခေတ် ဆိုင်ကယ်ဝယ်မပေးလို့ မိဘနှစ်ပါးကို….
uni မကြားဘူးတာတွေ ကြားနေရပြီ ဆိုင်ကယ်ဝယ်မပေးလို့ မိဘနှစ်ပါးကိုseemore ပင်လုံမြို့မှာ မကြားဖူးတာ မမြင်ဖူးတာ ဖြစ်ကုန်ပြီ၊ မိဘကို ဆိုင်ကယ်ဝယ်ခိုင်းတာ မဝယ်ပေးလို့ သားဖြစ်သူက မိဘနှစ်ပါးကို ဓားနဲ့ ထိုးသတ်လိုက်တယ်၊ တာဝန်ရှိလူကြီးများ သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါ အဖေက ကုတင်ဘေးမှာ သေနေတယ်၊ ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း အမေက အိမ်ဘေးထင်းပုံအောက်မှာ မြုပ်ထားတယ်၊ ဖြူစင်မေတ္တာနာရေးနှင့် မြတ်နှလုံးသားလူငယ်အဖွဲ့မှသွားရောက်ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးပြီး ဆေးရုံရင်ခွဲရုံသို့ ပို့ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရှိရပါသည်။ ပင်လုံမြို့မှာ မကြားဖူးတာ မမြင်ဖူးတာ ဖြစ်ကုန်ပြီ၊ မိဘကို ဆိုင်ကယ်ဝယ်ခိုင်းတာ မဝယ်ပေးလို့ သားဖြစ်သူက မိဘနှစ်ပါးကို ဓားနဲ့ ထိုးသတ်လိုက်တယ်၊ တာဝန်ရှိလူကြီးများ သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါ အဖေက ကုတင်ဘေးမှာ သေနေတယ်၊ ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း အမေက အိမ်ဘေးထင်းပုံအောက်မှာ မြုပ်ထားတယ်၊ ဖြူစင်မေတ္တာနာရေးနှင့် မြတ်နှလုံးသားလူငယ်အဖွဲ့မှသွားရောက်ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးပြီး ဆေးရုံရင်ခွဲရုံသို့ ပို့ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရှိရပါသည်။ […]
ရေစကြိုမြို့နယ်မှာ ပျူစောထီးသင်တန်းပေးနေတဲ့ အိမ်ကို PDFဝင်ရောက်စီးနင်း…(ရုပ်သံ)
March 13, 2022 March 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on ရေစကြိုမြို့နယ်မှာ ပျူစောထီးသင်တန်းပေးနေတဲ့ အိမ်ကို PDFဝင်ရောက်စီးနင်း…(ရုပ်သံ)
ရေစကြိုမြို့နယ်မှာ ပျူစောထီးသင်တန်းပေးနေတဲ့ အိမ်ကို PDFဝင်ရောက်စီးနင်း ရေစကြို မကွေးတိုင်း MilitaryCoupInMyanmar DeltaNewsAgency မကွေးတိုင်း ရေစကြိုမြို့နယ် ဂွေးချိုကျေးရွာမှာ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက ပျူစောထီးသင်တန်းဖွင့်လှစ်နေတဲ့ နေအိမ်တစ်လုံးကို PDFပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့Phoneixပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မတ်လ ၁၃ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၁နာရီခွဲလောက်က ဂွေးချိုကျေးရွာမှာရှိတဲ့ ပျူစောထီးခေါင်းဆောင် ကိုဝေလွင်ရဲ့ နေအိမ်ကို Phoenix-အထူးပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့၊ Urban Underground Revolution Force – YSO၊ သိန်းငှက်ပြောက်ကျားအဖွဲ့ ၊Southern Yesagyo PDF ၊ PKU N PDFတို့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေအိမ်ကို ဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ်မှာ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု နာရီဝက်ကျော်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက စစ်ကူရောက်ရှိလာတာကြောင့် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်း ပျူစောထီးတွေဘက်က သေဆုံးသူရှိမရှိကိုတော့ […]
အမေရိကန်က နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် US ဒေါ်လာ ၁၃၆ သန်းကျော် ကူညီပေးဖို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီ
March 13, 2022 March 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on အမေရိကန်က နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် US ဒေါ်လာ ၁၃၆ သန်းကျော် ကူညီပေးဖို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီ
uni အမေရိကန်က နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် US ဒေါ်လာ ၁၃၆ သန်းကျော် ကူညီပေးဖို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီ အမေရိကန်က မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၁၃၆ သန်းကျော် အကူအညီပေးဖို့ အစိုးရဘတ်ဂျက်ကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့တာကြောင့် ရက်ပိုင်းအတွင်း သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်က လက်မှတ်ထိုးပေးတော့မှာ လို့သိရပါတယ်။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ် အမေရိကန်အစိုးရဘတ်ဂျက်ကို မတ်လ ၁၁ ရက်က အတည်ပြုခဲ့ရာမှာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ကန်ဒေါ် လာ ၁၃၆ သန်းကျော်အကူအညီပေးမယ့်အစီအစဉ်လည်းထည့်သွင်းခဲ့တဲ့အပေါ် အမေရိကန်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးကလည်း ထောက်ခံခဲ့ကြတာပါ။ ထောက်ပံ့ကူညီမယ့် အရေအတွက်အတိအကျက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၆,၁၂၇,၀၀၀ ဖြစ်ပြီး အဲဒီငွေအားလုံးကို NUG အစိုးရ၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (NUCC)၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) ၊ စီဒီအမ် (CDM) နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ […]
Live လွှင့်နေရင်း ချစ်ဇနီးလေးရဲ့စ ကားတစ်ခွန်းကြောင့် အံ့သြကာသဘောတွေကျနေတဲ့သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်
March 12, 2022 March 12, 2022 Ok MediaLeaveaComment on Live လွှင့်နေရင်း ချစ်ဇနီးလေးရဲ့စ ကားတစ်ခွန်းကြောင့် အံ့သြကာသဘောတွေကျနေတဲ့သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်
Unicode အနုပညာလောကမှာလည်းပရိသတ်အားပေးမှုအပြည့်နဲ့အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ခုပရဟိတအလုပ်တွေမှာလည်း ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတာကတော့ ဝေဋ္ဌုကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဝေဋ္ဌုကျော် Foundation လေးကိုတည်ထောင်ထားပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်နေတာပါ။ ပရဟိတအလုပ်ကိုပဲ သေချာလုပ်တာကြောင့် အနုပညာနဲ့တော့ဝေးကွာခဲ့တာပါ။ ဒါမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ မပြတ်စေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလေ့ရှိပါ တယ်။ မကြာသေးခင်ကလည်း ပရိသတ်အချစ်တော်ပရဟိတမင်းသားကြီးဟာ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ဇနီးလေးကလည်း အငြိမ့်လောက မှမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာသမားအချင်းချင်းလိုက်ဖက်နေတာပါ။ ခုမှာလည်း လင်မယားနှစ်ယောက် Live လွှင့်ရင်းစနောက်နေတာပါ။ သူ့တို့ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ မန့်ကို Replyပြန်ရင်း ကျီစယ်စနောက်နေတာပါ။ ဘယ်လိုတောင်စနောက်ပြီး ပျော်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာကတော့ အောက်က video လေးကိုကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြပါဦးနော်။ Zawgyi အႏုပညာေလာကမွာလည္းပရိသတ္အားေပးမႈအျပည့္နဲ႔ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ခုပရဟိတအလုပ္ေတြမွာလည္း ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနတာကေတာ့ ေဝ႒ုေက်ာ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ေဝ႒ုေက်ာ္ Foundation ေလးကိုတည္ေထာင္ထားၿပီး ပရဟိတအလုပ္ေတြ လုပ္ကိုင္ေနတာပါ။ ပရဟိတအလုပ္ကိုပဲ ေသခ်ာလုပ္တာေၾကာင့္ အႏုပညာနဲ႔ေတာ့ေဝးကြာခဲ့တာပါ။ […]